किन अझै पुरा हुन सकेन मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान ? – Vision Khabar
किन अझै पुरा हुन सकेन मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान ?
। २८ बैशाख २०७५, शुक्रबार १७:२५ मा प्रकाशित
काठमाण्डाै । दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसहित १९ माघ ०७१ मा निर्माण सुरु गरिएको मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान चार वर्ष बित्दासमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २ सय ९४ रोपनी सरकारी जग्गामा भइरहेको निर्माणको अधिकांश काम सकिए पनि पूर्व–पश्चिम क्षेत्रको ४६ आना ३ पैसा निजी जग्गाको मुआब्जा विवाद नसल्टिँदा आयोजना लम्बिएको हो ।
जग्गा मुआब्जा विवाद रहेको पूर्व–पश्चिम क्षेत्रमा प्याराफिट निर्माण गर्ने योजना छ । उत्तरतर्फको प्याराफिट भने निर्माण सकिएको छ । मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सुरुदेखिको प्रयास सार्थक नहुँदा क्रिकेट मैदान निर्माण पूरा कहिले हुने भन्ने अन्योल कायमै छ । निर्माण पूरा भए १२ हजार दर्शक क्षमताको मूलपानी मैदान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि अनुकूल हुनेछ ।
मूलपानी डम्पिङसाइट हटेपछि २ सय ९४ रोपनी जग्गा चैत ०६० मा सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई उपभोग गर्न दिने निर्णय भयो । जसअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउने ‘मास्टर प्लान’ बनाएको थियो । उक्त मास्टर प्लानअनुसार तोकिएकोमध्ये ४६ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिको देखियो ।
तर, सरकारले स्थानीयको नाममा रहेको ४६ आना ३ पैसा जग्गाको विषय टुंग्याउन आलटाल गर्दा मूलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सपना पूरा हुन पाएको छैन । सरकारी मूल्यमै जग्गाको अधिग्रहणको कोसिस भएको थियो । तर, जग्गाधनीले आफूहरूले जीवनभर कमाएको रकम जग्गा किन्दा सकिएको भन्दै जग्गाको बदला जग्गा नै माग राख्दै आएका छन् । मुआब्जा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयले उपसचिव रत्नबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर विश्वमित्र सन्जेल र नारायण अर्याल सदस्य थिए । समितिले विवाद समाधान गर्न सकिने अवस्था रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सरकार र स्थानीयबीच पटक–पटक छलफलपछि जग्गाको बदला जग्गा नै दिने गरी सहमति भएको थियो । तर, मुआब्जाको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पूर्णता पाउन नसक्दा मूलपानी मैदानको अन्योल कायमै छ ।
खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले आफूहरूले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल बुझाइसकेकाले जतिसक्दो चाँडो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित हुने नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘हामी जतिसक्दो चाँडो विवाद समाधानका लागि लागिरहेका छौँ, अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट मुआब्जा विवाद समाधान हुन्छ,’ मन्त्री विश्वकर्माले भने ।
मुआब्जा विवाद समाधान भएपछि पनि मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न हुन अरू २ वर्ष लाग्न सक्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियर विश्वमित्र सन्जेलले बताए । उनले भने, ‘मुआब्जा विवाद समाधान चाँडो भए यसै आर्थिक वर्षभित्र टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।’ केही दिन मात्र ढिलो हुँदा यो आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान गर्न नसकिने उनले बताए । ‘अब केही दिन मात्रै ढिला हुने हो भने यो आर्थिक वर्षमा केही पनि काम अघि बढ्न सक्दैन, टेन्डरपछि पनि निर्माण सम्पन्न हुन २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ,’ सन्जेलले भने ।
मूलपानी मैदानको उत्तरतिरको प्याराफिट निर्माण पूरा भएको छ । परिषद्का इन्जिनियर सन्जेलले गुणस्तर जाँच भएर हस्तान्तरण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘उत्तरपट्टिको प्याराफिट निर्माणले पूर्णता पाएको छ ।’ सो प्याराफिट निर्माणका लागि १५ करोड ६२ लाख खर्च भएको उनले बताए ।